ဂျပန် Ikebana သို့မဟုတ် Flower စီစဉ် | Experience Japan
#1 Tea Ceremony Experience in Japan selected by Tripadvisor.
› ဘလော့ Myanmar › ဂျပန် Ikebana သို့မဟုတ် Flower စီစဉ်
ဂျပန် Ikebana သို့မဟုတ် Flower စီစဉ်
Ikebana ရှေးဂျပန်တွင်ထိုမူရငျးစီစဉ်ပန်းပွင့်ရဲ့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပန်းပွင့်နှင့်အခြားသဘာဝသဟဇာတ, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အလှအပ embody မှကဲ့သို့သောလမ်းထဲမှာထည့်ထားရှိရာတစ်အနုပညာအဖြစ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။
အဆိုပါစကားလုံး Ikebana ကိုယ်တိုင်က '' အသကျရှငျစီစဉ်ပေးပန်းပွင့် '' ကိုဆိုလိုသည်သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် '' ပန်းပွင့်အသက်ပေးခြင်း '' ။ ပန်းပွင့်ဝေးပြန်သတ္တမရာစုသကဲ့သို့ပြုသောပူဇော်သက္ကာဘို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဒါကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဗုဒ္ဓဘာသာဗိမာန်၌ဇစ်မြစ်ရှိပါတယ်။ ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များသို့အရွက်နှင့်အခြားသဘာဝပေါင်းထည့်ခြင်းအခြားဂျပန်ဘာသာ, ရှင်တိုကနေစိတ်ကူးတစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Shintoism လှပသောနှင့်ဝိညာဉ်အဖြစ်အားလုံးကသဘာဝဒြပ်စင်မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ပန်းပွင့်ယုံကြည်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများဟာသူတို့ရဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစီအစဉ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုဖန်တီးရန်အခြားသူများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်အခြားသူများအားသွန်သင်ပေးစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ် Ikebana ဆယ်ငါးရာစုအတွင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်အနုပညာစတိုင်လ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ် Ikebana ကျောင်းများအသီးအသီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အသွင်နဲ့စတိုင်ရှိခြင်း, ဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အပွင့်အစီအစဉ်များအတွက်များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်၏နေအိမ်များအတွက်ဒဏ်ငွေအနုပညာရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာ nageire တူသောစတိုင်များလက်ဖက်အခမ်းအနားနှင့် haiku ကဗျာကဲ့သို့အခြားသီးသန့်ယဉ်ကျေးမှုရေးရာနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်ကာလ၌အခြားသောအနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းစတိုင်များနှင့်နည်းစနစ် ikebana သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြပေမယ့်အခြေခံအကျဆုံးကျောင်းအုပ်အတူတူပင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအမှု၏အရေးအပါဆုံး ikebana နေဆဲအိမ်ပြင်ဟာအိမ်တွင်းပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ကူညီဝိညာဏလိုက်စားအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Iki: 'သန့်စင်ပြီးထူးခြားမှု' ဖို့ဘာသာအရာတစ်ဦးကဂျပန်ဗေဒဒြပ်စင်။
Moribana: ' စုဝေး. ' ဖို့ဘာသာကြောင့်ပန်းပွင့်အစီအစဉ်၏တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာစတိုင်။ အဆိုပါပန်းပွင့်နှင့်အခြားဒြပ်စင်အနိမ့်, ရေတိမ်ပိုင်းကွန်တိန်နာထဲမှာချထားပါသည်။
Nageire: 'အတွက်ပစ်ချ' ဖို့ဘာသာကြောင့်ပန်းပွင့်အစီအစဉ်၏နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့စတိုင်။ သဘာဝပစ္စည်းများအရပ်ရှည်ရှည်ပန်းအိုးအတွက်စည်းရုံးနေကြတယ်။
Rikka: 'ရပ်နေပန်းပွင့်' သို့ဘာသာပြန်ကြောင့်ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များ၏ရိုးရာစတိုင်။ ဒါကစတိုင်ကသဘာဝမြင်ကွင်းများကိုယ်စားပြုခုနစျပါးအကိုင်းအခက်များကိုအသုံးပြုသည်။
ရှင်ကောင်းကင်ကိုယ်စားပြုပြီး shoka ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များအတွက်အရေးပါတဲ့ဒြပ်စင်ကြောင်းဌာနခွဲ။
စိုး: လူကိုကိုယ်စားပြုပြီး shoka ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များအတွက်အရေးပါတဲ့ဒြပ်စင်ကြောင်းဌာနခွဲ။
Tai: မြေကြီးတပြင်ကိုယ်စားပြုပြီး shoka ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များအတွက်အရေးပါတဲ့ဒြပ်စင်ကြောင်းဌာနခွဲ။
Ikebana Element တွေကို:
Ikebana အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိပန်းပွင့်အစီအစဉ်၏အခြားအမျိုးအစားများမှစှာကွဲပြားခြားနားသည်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပန်းပွင့်အစီအစဉ်အိုးထဲမှာအချိုးကျပန်းပွင့်နှင့်အခြားစက်ရုံ element တွေကိုစီစဉ်ပါဝင်ပါသည်။ Ikebana ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်စဉ်အတွင်းသဘာဝနဲ့ရငျးနှီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးကြောင့်၎င်း၏အဆင့်မြင့်လိုက်စားရန်အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤတွင်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များမှာ Ikebana ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူ:
•အနည်းငယ်မျှသာ: အနည်းငယ်မျှသာ၏ဗုဒ္ဓဘာသာစံနမူနာ ikebana ၏အဓိကမှာရှိပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်များထဲသို့သွင်းထားသဘာဝဒြပ်စင်ပန်းပုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရွက်ကိုသူတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူဖြည့်ပုံကိုအားဖြင့်၎င်း, တစ်ဖွဲ့လုံးကချောခင်းကျင်းပြသ၏စတိုင်နှင့်အတူရွေးကောက်တော်မူရပါမည်။
• Shape နှင့်လိုင်း: အားလုံးပုံစံမျိုးစုံနှင့်လိုင်းများသဘာဝကြည့်အနေအထားတွင်ထားရှိရပါမည်အဖြစ်ဒီဒြပ်စင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမှဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖြောင့်မတ်အစီအစဉ်များကိုမကြာခဏခိုင်မာသော, ဖြောင့်လိုင်းများပူဇော်ကြောင်းကိုင်းအခက်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤသည်မှာအပင်တစ်ပင်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ, မာကျောမှုကြုံးဝငျပတျသကျ။ အစီအစဉ်၏တစ်ဦးက slanting စတိုင်ချစောင်းပေါက်သောပန်းပွင့်နှင့်မြက်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပျော့ပြောင်းပြီးဒြပ်စင်နှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ကျေးဇူးတော်တစ်အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်။
•ဖွဲ့စည်းပုံ: အတော်များများရိုးရာဂျပန်ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များတစ် scalene တြိဂံအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ တြိဂံ၏ရမှတ်များသောအားဖြင့်ရှိတဲ့အကိုင်းသို့မဟုတ်အကိုင်းအခက်နှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။ ဒီစတိုင်ရဲ့အစီအမံဖွဲ့စည်းပုံမှာ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဝိညာဏကမ္ဘာကြီးကိုကိုယ်စားပြုအဖြစ် shoka ဟုခေါ်တွင်တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာစတိုင်, တဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်ဒီကြာပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်အတွက်အရှည်ဆုံးနျဌာနခှဲသို့မဟုတ်ပန်းပွင့် Shin ဟုခေါ်တွင်, ဤသညျကောငျးကငျဘုံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါအလတ်စားနျဌာနခှဲသို့မဟုတ်ပန်းပွင့် soe လူကိုကိုယ်စားပြုလျက်, အတိုဆုံးနျဌာနခှဲသို့မဟုတ်ပန်းပွင့်, Tai, မြေကြီးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
• Form ကို: အပန်းပွင့်နှင့်အခြားစက်ရုံဒြပ်စင်၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲစီစဉ်ထားခြင်းနှင့်အတင်းအဓမ္မခံထက်, အစီအစဉ်ကာလအတွင်း '' ကိုတွေ့ '' ရပါမည်။ ဒါဟာပန်းပွင့်အကိုင်းအခက်၌သင်တို့ကို '' အဲဒီမှာပြီးသား '' သည်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေသင့်ကြောင်းဆိုပါတယ်နှငျ့သငျရှေးခယျြအရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် ikebana အစီအစဉ်နေရာလွတ်, မညီမညာဖြစ်နေသောနံပါတ်များနှင့် Bloom တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအရေအတွက်ကများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် asymmetry နှင့်မစုံလင်မှုအလေးပေးဖော်ပြသည်။
•ဗေဒ: အစီအစဉ်၏အလုံးစုံခံစားရိုးရာဂျပန်တန်ဖိုးများ embody သငျ့သညျ။ ဒါကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်တစ်ဦးကလမ်း iki သို့မဟုတ် 'သန့်စင်ပြီးထူးခြားမှု' 'ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကရှင်းပြသည်သောစတိုင် rikka ဒါမှမဟုတ် '' ရပ်နေပန်းပွင့် '' စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစတိုင်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏အစီအစဉ်များအတွက်တောင်ကုန်း, ရေတံခွန်များနှင့်ချိုင့်အဖြစ်ကသဘာဝရှုခင်းများ၏ဂုဏ်အသရေဖြစ်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုခုနစျပါးအကိုင်းအခက်များကိုအသုံးပြုသည်။
•လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နဲ့တိတ်ဆိတ်: Ikebana လည်းအစီအစဉ်ရဲ့ဖန်တီးသူတစ်ဦးဂျဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာဖန်တီးသူရဲ့စိတ်အခြေအနေနှင့်သဘောသဘာဝနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ငါထင်တစ်ဦးကစတိုင်ကဒီကရောင်ပြန်ရေကူးကန်အဖြစ်စီစဉ်ပေးသောရေတိမ်ပိုင်းပန်းကန်အသုံးချသော moribana အစီအစဉ်နှင့်အတူတစ်ခုဖြစ်သည်ကြုံးဝငျပတျသကျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်စကားမပြောသင့်ပါတယ် ikebana အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနေစဉ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာသင်သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌ပုံသဏ္ဍာန်တာသဘာဝဒြပ်စင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားရာဘာဝနာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သင့်သည်။
1. ဂျပန်တွင် ikebana ကျောင်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးတည်းရှိပါတယ်, အများဆုံးကောင်းစွာသိ Ikenobo ကျောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကျိုတိုမှာရှိတဲ့ Choho-ji ဗိမာန်တော်၌စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပြန့်နှံ့အခန်းကြီးကတည်းကရှိပါတယ်, နှင့်မကြာသေးမီကအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိ 60,000 ကျော်ဆရာ, ဆရာမထည့်သွင်းရန်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြအများအပြားရာ၏နှစ်စဉ်အကြမ်းဖျင်း 15 လူဦးရေသန်းဖြင့်ကျင့်သုံးနေပါတယ်အဖြစ် Ikebana က၎င်း၏နေအိမ်နိုင်ငံတွင်နေဆဲအလွန်ရေပန်းစားသည်။
2. များစွာသောမိန်းမ ikebana လေ့ကျင့်နေစဉ်, ကိုလည်းသမိုင်းကြောင်းအအဖြစ်ကောင်းစွာလူကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲတစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့စစ်သည်တော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမခံရမီ, စီစဉ်ပန်းပွင့်အဖြစ်ကအခြားအရေးကြီးသောယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများဆုံးမသွန်သင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်အမျိုးသမီးထက်ပိုပြီးဦးဆောင်အထီး Ikebana သခင်ရှိပါသည်။
3. ခေတ်သစ်စတိုင်များနှင့်နည်းစနစ် ikebana အစီအစဉ်များကိုအတူတကွထားကြသည်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ အသစ်ကစတိုင်များနှုတ်ဆက်ပြီးခဲ့သူတစ်ဦးကထိုကဲ့သို့သောမာစတာကသူ့ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များအတွက်အင်္ဂတေ, ပလပ်စတစ်နှင့်ပင်သံမဏိကိုအသုံးပြုတဲ့သူ Techigahara Sofu ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်သူ့ရဲ့စံနမူနာအဖြစ်ကောင်းစွာသစ်ကိုကျောင်းသားများကကျင့်သုံးနေကြသည်ဒါကြောင့်သူဟာ Sogetsu ကျောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
4. Ikenobo ကျောင်းအပြင်, နှစ်ခုကတခြားလူသိများတဲ့ကျောင်း Sogetsu ကျောင်းနှင့် Ohara ကျောင်းဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီနှစျခုကကျောင်းတွေ, ပိုပြီးခေတ်မီရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုအကြမ်းဖျင်းရာစုနှစ်တစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်ဖြစ်ခြင်း။ အဆိုပါ Sogetsu ကျောင်းနှင့် Ohara ကျောင်းပိုပြီးလူကြိုက်များအနောက်တိုင်း element တွေကိုထည့်သွင်းဖို့လိုခငျြတဲ့သူ ikebana သခင်ကတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။
5. သင်တစ်ဦး ikebana အစီအစဉ်လူတန်းစားတက်ရောက်ရန်ပြုလျှင်, သင်ယူဖို့လိုအပ်မယ်လို့အတန်းအချို့သူတို့ကိုချိုးဖျက်သို့မဟုတ်သဘာဝကိုကြည့်ရိုးရာ element တွေကိုသင်္ကေတမှပန်းပွင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်း, ထိုဖော်ထုတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အကိုင်းကွေး, မှန်ကန်စွာကွဲပြားခြားနားသောအပင်ကိုချုံ့ဖို့ကတ်ကြေးအသုံးပြုနေသည် သင့်ရဲ့အစီအစဉျကိုသင့်လျော်သောပန်းအိုးသို့မဟုတ်ပန်းကန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှလတ်ဆတ်တဲ့အဖြစ်သင့်ကိုသဘာဝဒြပ်စင်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
6. သငျသညျကျွမ်းကျင်သူများကမိမိတို့၏အရည်အချင်းများနှင့်နည်းစနစ်တခုအဖြစ်မြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ ikebana အစီအစဉ် display တွေရှိပါတယ်။ ဤအပြပွဲ၏အတော်များများက '' ပန်းပွင့်မှတဆင့်ခင်မင်ရင်းနှီး '' ထက်ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်လူသိများကြသည်အဖြစ်တခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယှဉ်ပြိုင်ရှိရာဂျပန်နိုင်ငံအတွက်နှစ်စဉ်စီစဉ်ပြိုင်ပွဲလည်းရှိပါတယ်။ ဤအပြိုင်ပွဲ၌, သခင်တူညီသောပစ္စည်းကိရိယာများ, ပန်းပွင့်နှင့်အပင်များပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များအောင်မှာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသာနှင့်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
7. Ikebana သင်ယူလိုသောသူတို့အဘို့ကျောင်းကအတန်းများနှင့်ကလပ်များပြီးနောက်တဆင့်ကျောင်းသားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုများ - '' ကိုမည်သို့ 'နှင့်ဂျပန်တီဗီရှိုးအပေါ် Ikebana လည်းမှန်မှန်မှတဆင့်ပြသနေသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောပြပွဲ Seikei Bijin သို့မဟုတ် Artificial အလှအပ, အထီးဇာတ်ကောင်နှင့်ချစ်ခြင်းအကျိုးစီးပွားအဖြစ် ikebana မာစတာရှိပါတယ်တဲ့ဒရာမာတီဗီစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။
8. မဟုတ် ikebana နေစဉ်, ဂျပန်ကနေဆက်စပ်ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှု kodo ဟုခေါ်သည်။ ဒီအမွှေးအကြိုင်များနှင့်နံ့သာပေါင်းကိုသုံးပြီးများ၏ရိုးရာအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ikebana နှင့်ရိုးရာလက်ဖက်အခမ်းအနားနှင့်အတူစစ်ခံရဖို့စဉ်းစားခံရဖို့ဆန္ဒရှိသော်လည်းလျှင်ဒီအလေ့အကျင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လေ့လာသင်ယူသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးပြုတဲ့ပန်းပွင့်အချို့ကိုလည်းလူကြိုက်များနံ့သာပေါင်းကိုရနံ့တွေဟာအတိုင်းဤ ikebana ရန်နောက်ထပ်လည်စည်းရှိပါတယ်။
9. ပန်းပွင့်ဖို့ဆက်ဆံမှုရှိကြောင်းနောက်ထပ်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှု bonsai စိုက်ပျိုးမှုသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့အလှအပနှင့်သဘာကျေးဇူးတော်တခုအဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အထူးသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံအတွက်သေးငယ်တဲ့သစ်ပင်များကြီးထွားလာ၏အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ikebana ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များမှာတွေ့ရှိအတော်များများဗေဒ bonsai စိုက်ပျိုးမှုတွင်လည်းအရေးကြီးလှသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် ikebana ခရီးကိုဆက်လက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင် A ကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသယံဇာတ https://www.ftd.com/blog/design/ikebana မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီ website သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပန်းပွင့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်နည်းစနစ်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ခြေလှမ်းသင်ခန်းစာကခြေလှမ်းရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်း ikebana ဆရာ, ဆရာမများလည်းရှိပါသည်သောကြောင့်သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေလျှင်, သင်အနီးရှိအရည်အချင်းပြည့်နည်းပြဆရာကိုရှာဖွေပေမည်။ http://www.ikebanahq.org/index.php မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်အိမ်ပြန်မှာဒီအနုပညာလေ့ကျင့်ချင်လျှင်သင်ကူညီပေးဖို့အများကြီး Youtube ကိုဗီဒီယိုများနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုရှိပါတယ်။
MaikoMaikoyaShinsaibashiikebanabonsaiအိုဆာကာဂျပန်maikoya အိုဆာကာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုပန်းပွင့်ဂျပန်ထုံးတမျးစဉျလာပန်းပွင့်စီစဉ်Maiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်